Umhla My Pet » Zenza ntoni Yakho Ibonisa Ntoni Ngawe
Kanye okanye hayi, indlela siye ebomini uthi okuninzi malunga iinkalo ezahlukeneyo ubuntu bethu. Njengokuba, umntu enkulu emsebenzini ngokuqhelekileyo uya kuba nembono kancinci ngqongqo kubomi kunye babethanda ukugqibelela. Kwelinye icala, unako phantse unokuqiniseka ukuba naye lowo weza eofisini isosi kwi kumkhono yakhe ihempe ayisiyiyo ngumntu ngenyameko kakhulu. Kanjalo, oku akuzukuba sokulinganisa ubuntu lomntu ngokubanzi. nokuba, bona ziyibonisa ekhuselekileyo indlela umntu onokubona jikelele ubomi. Kulwandiso le, abantu abakhetha izilwanyana ezahlukileyo izilwanyana ngokuqhelekileyo uza iimpawu ezithile.
Iindaba ezimnandi kukuba abanini inja nkathalo kakhulu, efudumeleyo zibaqhubayo kwaye sizimisele. Emveni kwakho konke, izinja kufuneka ingahoywa. Ukuba iqabane lakho umntu inja, kukho ithuba eliphezulu kakhulu ukuba bakholisa ukuba bunganothando ngakumbi ubudlelwane. abathandi Dog kwakuya kuba noxanduva nangakumbi ngenxa yokuba izinja emva zonke zifuna eninzi ingqalelo ngokunjalo. Enye into entle malunga kubanini inja kukuba amaxesha amaninzi, ba zi the nangokunyaniseka iqashiso.
Iikati sele esazi ukuba wayenempakamo kakhulu phakathi kwabantu. nokuba, nobona izidalwa olubuthathaka kakhulu aze okunene uyinqwenela umsa. abanini Cat ubonisa iimpawu ezifana. kakhulu zi nca ukuba izilwanyana zabo bayakuthanda ukuba iziko ingqalelo (nangona bona sukubonisa). Undoqo ndithandana umnini ikati ngokumbonisa elibulingana ingqalelo yaye unovelwano ngeemvakalelo zabo.
Kanjalo, kukho ingxoxo enkulu mayela nokuba ingaba ngenene ilungelo ukugcina intaka njenge pet indlu. Nangona abanye abantu ukufumana ngeenxa ngokwakha ngezindlu zeentaka kwigadi zabo ukunika iintaka zabo inkululeko babehlala njengoko ngokwemvelo ukwenza. abanini enye intaka imini baphile ubomi babo ngexesha njengoko enjalo, idla kungafunyanwa izicwangciso non-conformist. Kwakhona bakholisa ukuba buchule kwaye kufuna.
Iintlanzi njengoko izilwanyana zezi kufutshane izinto ezingezo-Animate njengoko nesilwanyana kunokuba. qiniseka, ukuba kakhulu ukubukela Dada intlanzi kwisitya iintlanzi okanye itanki. nokuba, umntu ngokwenene ukufumana kakhulu indlela-ezimbini intsebenziswano weentlanzi. Abantu abakuthandayo neentlanzi abe izilwanyana ngokuqhelekileyo ndisidla ngaphezu abaninzi. nokuba, ba kwa ezihle kakhulu kunabanye abantu kwaye jikelele ochaphazelekayo malunga nemimiselo uluntu eqhelekileyo.
imivundla, hamsters neehagu Guinea
Ezi zilwanyana zidla amabi kakhulu ngabantwana abancinane elivisayo. Kanjalo, kukho kwakhona iqela abadala kwenza ezincinane, izidalwa buboya ukufuywa. Aba ngokubanzi abantu Bayalufumana unxulumano kodwa Sizimisele ukuvavanya emhlabeni yokuqala ngokwemiqathango izilwanyana. Ba kwa ashushu yaye simthanda kunye ngomkhwa uxanduva. Ezi abathandi pet anothando ezonwabisayo ukuqhula.
Kuthekani ngabo awunalo izilwanyana ekhaya? Okanye abo musa Ndiyaxela naluphi na uthando izilwanyana? Kwesi sihlandlo, Ngaba ngokuqinisekileyo akuthethi ukuba abandayo zilumkileyo okanye azikho emarikeni ulwalamano lothando. Iimeko zidlala indima ebalulekileyo ekuqinisekiseni ukuba umntu abe nomdla ngakumbi abanye lokuba isilwanyana. abanini Non-pet kwakhona kunyaniseka kakhulu, uxanduva kunye nenkathalo!
Amaqokobhe enathi, kusenokwenzeka ukuba uza kuza enqumla umnini pet lowo namnye iimpawu zichazwe ngasentla. Oku akukho luhlu bokuphela iimpawu zobuntu ngokodidi lwesilwanyana ukuba uthanda. nokuba, uphando ngokwaneleyo sele kuqhutywa ukubonisa ukuba kukho ukuvumelana jikelele kwimpawu neempawu lover isilwanyana ngasinye kungenzeka ukuba nilime. Enoba isilwanyana igcinwa ekhaya, ulwalamano nangoku isixa iinxalenye ezimbini ngokulinganayo phakathi kwabantu ababini abazimiseleyo.